へブル人への手紙 1 JCB – Hebrifoɔ 1 ASCB | Biblica
へブル人への手紙 1 JCB – Hebrifoɔ 1 ASCB
1Mmerɛ a atwam no, na Onyankopɔn nam akwan ahodoɔ bebree so fa adiyifoɔ so kasa kyerɛ yɛn mpanimfoɔ. 2Nanso, mmerɛ a ɛdi akyire no deɛ, ɔnam ne Ba no so akasa akyerɛ yɛn. Ɔno na Onyankopɔn nam ne so bɔɔ ewiase. Na ɔno na Onyankopɔn ayi no sɛ awieeɛ no, nneɛma nyinaa bɛyɛ ne dea. 3Ɔnam hyerɛn a Onyankopɔn animuonyam hyerɛn no so hran. Ɔyɛ Onyankopɔn sɛso pɛpɛɛpɛ, na ɔde nʼasɛm a tumi wɔ mu no sɔ ewiase mu. Ɔtee nnipa ho firii wɔn bɔne mu wieeɛ no, ɔtenaa Otumfoɔ Onyankopɔn nifa so wɔ ɔsoro. 4Ɛno enti, ɔyɛɛ kɛse sene abɔfoɔ no, ɛfiri sɛ, edin a Onyankopɔn de too no no yɛ kɛse sene wɔn deɛ no.
5Ɛfiri sɛ, Onyankopɔn nso anka ankyerɛ nʼabɔfoɔ no mu biara sɛ,
“Woyɛ me Ba;
na ɛnnɛ, mayɛ wʼAgya.”
Ɛnna wanka ankyerɛ ɔbɔfoɔ biara sɛ,
“Mɛyɛ wʼAgya na wayɛ me Ba.”
6Ɛberɛ a Onyankopɔn pɛɛ sɛ ɔsoma nʼabakan no ba ewiase no, ɔsane kaa sɛ,
“Ɛsɛ sɛ Onyankopɔn abɔfoɔ nyinaa som no.”
7Asɛm a Onyankopɔn ka faa abɔfoɔ no ho ne sɛ,
“Onyankopɔn soma nʼabɔfoɔ sɛ mframa,
na ɔsoma nʼasomfoɔ sɛ gyadɛreeɛ.”
8Na ɛfa Ɔba no ho no, Onyankopɔn kaa sɛ,
“Ao, Onyankopɔn, wʼahennwa bɛtena hɔ daa nyinaa;
wʼAhennie yɛ atɛntenenee.
9Wodɔ tenenee, na wokyiri bɔne,
ɛno enti, Onyankopɔn wo Onyankopɔn de wo asi wo mfɛfoɔ so,
na ɔde anigyeɛ ngo asra wo.”
10Onyankopɔn sane kaa sɛ,
“Mfitiaseɛ no wotoo asase fapem,
na ɔsoro yɛ wo nsa ano adwuma.
11Ne nyinaa bɛtwam na wo deɛ wobɛtena hɔ daa;
wɔbɛtete sɛ atadeɛ.
12Wɔbɛbobɔ no sɛ ntoma;
na wɔbɛsesa no sɛ ntadeɛ.
Nanso, wote sɛdeɛ woteɛ,
na wo mfeɛ to rentwa da.”
13Onyankopɔn anka ankyerɛ nʼabɔfoɔ no sɛ,
“Montena me nifa so
kɔsi sɛ mede mo atamfoɔ bɛyɛ
mo nan ntiasoɔ.”
14Sɛ saa a, na abɔfoɔ no yɛ dɛn? Wɔn nyinaa yɛ ahonhom a wɔsom Onyankopɔn na ɔsoma wɔn ma wɔkɔboa wɔn a wɔrehwehwɛ nkwagyeɛ no.
ASCB : Hebrifoɔ 1